Shiinaha ayaa horseeday soosaarayaasha fiiq fiiqda iyo alaabada | Huayuemei
led faafiyaha light light
Shayga Lattice LED Strip
Faahfaahinta 580 * 16.8 * 1.6mm
Midab xumida 6000-7000K, La habeeyay
Awood 7.2w / kumbiyuutarada
Cabir kale 58cm oo leh 8leds, 56cm oo leh 6leds
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xargaha nalka LED-ka ee khafiifka ah oo kuu oggolaanaya inaad xakameyso dhalaalka nalalkaaga xargaha. Haddii aad rabto nalalkaaga iftiinka ugu sarreeya ee iftiinka hawsha ama hoos ugu dhig iftiinka niyadda. Waxaa ku shaqeeya Epistar chip 3030 SMD LED.
1.6mm saldhiga aluminium ee kuleylka kuleylka wanaagsan.DC12V / 24V sahayda tamarta hooseysa, amniga iyo waxtarka tamarta. Cimri dheer
Xulo Ikhtiyaarrada Ikhtiyaariga ah ee Fudud ee Fudud ee Kumbuyuutarka
Markaad go'aansato nooca iftiinka LED-ka ee aad rabto, waxaa muhiim ah inaad doorato ikhtiyaarrada nalka iftiinka LED-ka saxda ah. Huayuemei waa xalka nalalka hal-joogsi ah oo bixiya qalabyo kala duwan oo loo yaqaan 'LED' si loo rakibo, loo shaqeeyo, iyo wax ka beddelka nalalkaaga LED.
Ugu dambeyntiina, waxaan si ballaaran u soo saari doonnaa amarradaada iyadoo la hubinayo inay u dhigmaan shuruudahaaga. Waxaan qabannaa baaritaan adag oo tayo leh inta lagu gudajiro geedi socodka waxsoosaarka oo dhan sidaa darteed waxaan kuu xaqiijin karnaa inaad heli doonto xalalka nalalka LED-ka oo ka sarreysa filashadaada.
1.Kulka midabka, CRI, Cabbirka ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo codsigaaga. Waxay ku yareyn kartaa xakamaynta.
2. Waxaan aqbalnaa OEM & ODM si waafaqsan codsigaaga.
3. Bixi adeeg tayo sare leh oo ugu fiican iibka kadib.
4. Garanti waa 3 sano.
5.Xaraarada shaqadu waa -50 ℃ ~ 50 ℃.
6. Waxaan u siineynaa macaamiisheenna agab iyo badeecooyin u habboon deegaanka.
7. Isha toosan ee isha adag ee toosan ee sanduuqyada fudud ee khafiifka ah iyo saqafyada gadaal ka iftiimiya
8. SMD 3030 LED sare oo dhalaalaya oo leh 110 lumen
9. Muraayadaha indhaha ee 'PMMA' oo hufan, wasakh la'aan, nal la'aan
10. Xagal xagal aad u baaxad weyn oo ah 165 digrii
11. Muraayadaha muraayadaha indhaha waxaa lagu dhejiyaa PCB-ga iyadoo dhalaalaya kululaa proce ss taas oo aad uga xoog badan xabagta dhaqameed
17. 16.8mm PCB aluminium tayo sare leh oo tayo sare leh lehna awood kuleyl-ku-daadin
Waxay khuseysaa xayeysiinta sanduuqa nalka iftiinka & unugyada xargaha, sidoo kale codso dukaanka silsiladda, hudheelka, xarunta laga dukaameysto, tareenka dhulka hoostiisa, garoonka diyaaradaha, saldhigga iwm. sanduuqa sanduuqa iftiinka 'Exhibition', Iftiinka saqafka. Dhisida nalalka qurxinta, astaamaha xayeysiinta ee looxyada. Waxaa lagugula talinayaa qoto dheer 4-20cm sanduuqyada fudud ee hal dhinac ah
Hore: waxay keeneysaa baararka iftiinka leh ee korantada sare leh oo loo shiday sanduuqa iftiinka sanduuqa nalka xayeysiinta
Xiga: Guddi Barnaamij Barnaamij ah oo loogu talagalay sanduuqa iftiinka dharka
Guddi hoggaamineed oo gadaal loo shiday
Guddi nalka jilicsan oo jilicsan
SMD5050 biyuhu led led light for dhar l ...
2835 midab labalaab ah ayaa horseeday iftiinka shaashadda
Guddi dhalaalaya oo dhalaalaya oo dhalaalaya